Fil d'actualités du 25/05/2019
25/05/2019 - 19:30 : VAOVAO MAMPALAHELO: Nodimandry i Andriambolatiana Miarantsoa na Mitchou Amy, mpikambana ao amin'ny Tarika RyKala Vazo. Fahatapahan'ny lalan-dra in-telo no nitarika ny fahafatesany taorian'ny nampidirana azy tao amin'ny Sampana Fameloman'aina Hopitaly HJRA Ampefiloha.
25/05/2019 - 17:00 : GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR:Mpangalatra entana roa tratra nadritra ny grande braderie de Madahasikara tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina,marihina mo fa efa notazomina eny amin'ny biraon'ny pôlisy izy roa vavy araka ny fanazavana nataon'ny mpikarakara avy ao amin'ny "Mada vision".
24/05/2019 - 16:40 : ANALAKELY:Fiara 4x4 iray nandona olona tetsy akaiky ny TANA CONFOR ary refa nosakanana dia tsy nety nijanona fa nitohy nihazo ny Pochard ka nifanejehana ka voasakan'ny mpitandro filaminana teo apitan'ny gastro pizza ka nosamborina avy antrany,marihina mo fa teran-tany vahiny no nitondra ilay fiara.
24/05/2019 - 15:00 : FAMPIELEZAN-KEVITRA:Hifarana rahampitso Asabotsy amin'ny 12 ora alina ny fampielezan-kevitra izay ataon'ireo kandida nilatsaka ho fidiana solombavambahoaka.
24/05/2019 - 14:30 : PERMIS BIOMETRIKA:nampafantarina tamin'ny fomba ôfisialy tetsy amin'ny Centre immatriculateur Ambodahy ny permis vaovao na ny fahazahoan-dàlan hitondra fiara amin'ny endriny vaovao.
24/05/2019 - 14:15 : MONDIALE 2022:Fantatra androany fa hijanona ho 32 ireo ekipa hifanandrina amin'ny lalao baolina kitra "mondiale 2022"
23/05/2019 - 14:30 : JAZZ TOHATOHABATO:Ho an'ireo mpakafy Jazz dia tsara ny mampafatantra fa hoa avy indray ny Jazz tohatohabato andian'ny faha sivy izay hanomboka ny faha 29 may ary hifarana ny faha 2 Jona ho avy izao.
23/05/2019 - 14:10 : ANDRO TSY HIASANA:Nanamafy ny minisiteran'ny serasera fa natokana ho andro tsy fiasana ny Talata 4 Jona hoavy izao,Marihina fa fetin'ny mpino silamo io andro io izay antsoina hoe "Eid al-fitr";tahaka ny fety kristianina toy ny pantekosta izay natao tsy hiasana.
23/05/2019 - 10:00 : BAOLINA KITRA: Azon'ny Charleroi SC klioba misy ilay Malagasy Maro Ilaimaharitra ny "Coupe de Belgique" rehefa nandresy 2-1 an'i Courtrai izy ireo halina.
23/05/2019 - 10:00 : MPISOLOVAVA WILLY RAZAFINJATOVO: Hiakatra fitsarana anio amin'ny 2ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitrano faha-4 Atoa Willy Razafinjatovo na Olala.
Archive du 20190213
La City Ivandry Voasambotra i Eddy boaderozy
Tahaka ireny amin’ny sarimihetsika ireny ny zava-niseho tetsy amin’ny La City Ivandry omaly talata takariva manodidina ny tamin’ny 4 ora sy sasany.
Kofona Rajoelina sy ny IEM Mandadilady amin’ny mpamatsy vola
Nandritra ny fihaonana tany Addis Abeba, dia nangataka ny filoha Rajoelina mba hampitomboina avo 5 heny na 10 heny mihitsy aza ny fanampian’ny banky Afrikanina momba ny fampandrosoana (BAD),
Fanentanana momba ny fifidianana Izao vao mamovokovoka ny CENI
Namory ireo sefo fokontany teto Antananarivo sy ny manodidina ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) momba ireo izay tsara ho fantatra sy tandremana ao anatin`ny fanatanterahina fifidianana izany.
Resaka fanonganana an-dRakotovao Kajikajy politika, hoy ny loholona Amido
Resaka nampisafotofoto teo anivon’ny antenimierandoholona hatramin’ny herinandro teo ny resaka fanonganana ny filohan’ity andrim-panjakana etsy Anosy ity, Rivo Rakotovao.
Tabera Randriamanantsoa “Tsy maintsy ho lany ny kandida miisa 20 halatsakay ”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny avy eo anivon’ny antoko politika Kintana tarihin’ny filohany, Tabera Randriamanantsoa, manoloana ny fidangan’ny vola tsy maintsy aloa raha te hilatsaka ho solombavambahoaka.
Tany tan-dalàna Mijanona ho teny filamatra fotsiny
Tsy misy fanjakana tan-dalàna mipetraka fa fikatsahana fanjakana tany tan-dalàna no tena misy manerana izao tontolo izao.
Hugue Ratsiferana Tratry ny velam-pandrika…
Niakatra fitsarana omaly i Hugue Ratsiferana, rehefa notorian’ny fanjakana, ka naiditra am-ponja vonjimaika.
Ambovombe Androy Potika ny tontolo iainana
Tsy mahagaga raha miverimberina hatrany ny kere any amin’ny faritra Atsimo.
HOPITALIBE ANKAZOBE May nipoahan'ny lasantsy ny mpitsabo
Kilan'ny afon-dasantsy ny Dokotera iray tao amin'ny Hopitalibe Ankazobe.
Fifidianana Filohan’ny ZAD Fenoarivobe Hatao eny Itaosy ny sabotsy 16 febroary
Nofohazin’Atoa Randrianarisoa Hery Tiana izay tompon-tanàna any Fenoarivobe ny Zanaka am-pielezana rehetra mba handray ny andraikiny araka izay vitany sy azony atao hahatonga ny Distrikan’i Fenoarivobe hivoatra sy ho maodely.
Polisy Monisipaly eto Iarivo Manatevina traikefa hatrany
Hatevenina ny fahaiza-manaon’ny Polisy Monisipaly eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Rotsak’orana Mbola hitohy hatramin’ny faran’ny herinandro
Mbola hitohy hatramin’ny faran’ny herinandro ny ranon’orana eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby.
Fampitana mivantana ny CAN 2019 Hiresaka amin’ny filohan’ny CAF ny minisitra Tinoka Roberto
Amin’ny faran’ny volana izao ny tenako no hihaona mivantana amin’ny filohan’ny CAF am-perinasa izay fantatsika fa teratany Malagasy ka hidinika ny amin’io resaka io.
Mba manana hazon-damosina ihany ve?
Kihon-dàlana vaovao ho an’ny firenena no nolalovantsika tamin’ny fifidianana sy lalovantsika amin’izao efa fisian’ny fanjakana natao izay haha ara-dalàna azy izao.
Fitrandrahana solika mavesatra Hovonoina i Tsimororo ?
Hanara-dia an`i Bemolanga koa ve, araka ny efa nihirahiran`ny tarika Mahaleo azy ny toeram-pitrandrahana soliky ny ``Madagascar Oil`` any Tsimiroro (Faritra Melaky) atsy ho atsy ?
Distrikan’i Besalampy Mikorosofahana tanteraka ny mponina
Mampalahelo tanteraka ny zava-misy ankehitriny any amin’ny Distrikan’i Besalampy faritra Melaky, hoy ny solombavambahoaka teo aloha, Delphine Florentine.
Asan’ireo injeniera elektronika Hazavaina etsy amin’ny IKM Atsahavola
Hatramin’ny omaly ary hifarana anio ny fampirantian’ireo mpianatra mpikaroka taona voalohany hatramin’ny fahadimy eo anivon’ny oniversite politekinika Vontovorona ireo tetikasany mandritry ny fianarany eny amin’ny anjerimanontolo.
Alatsinainikely Analavory Voatifitry ny zandary ilay jiolahy mpikapa amin’ny famaky
Mpivaro-mandeha nitondra fiara mpitety tsena ambanivohitra no voatafiky ny jiolahy mirongo basy sy famaky ary vato, tao amin’ny Kaominina Alatsinainikely Analavory, Distrikan’i Miarinarivo, afak’omaly alatsinainy, sahabo ho tamin’ny telo ora tolakandro.
0maly koa dia mbola nisy nidoboka am-ponja vonjimaika ny mpanao trafika bois de rose.
Traboinan’Ampamarinana Niala teny amin’ny « Village Voara »
Tantara mitohy ny olana mahazo ireo traboina vokatry ny vato nianjera teny Ampamarinana.
Rano be eny Besarety Vokatry ny vatokely sy tany manentsina tatatra
Na dia efa nanao izay ho afany nanadio ny tata-drano teny Besarety sy ny manodidina aza ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny Boriborintany fahatelo tamin’ny faran’ny taona 2018 dia mbola manana olana hatrany izy ireo ny amin’ny fiakaran’ny rano.
Mpiasa nahavita be Nahatratra 268 ireo notoloran’ny Star mariboninahitra
Tsy manadino ireo mpiasa nahavitabe tao aminy ny orinasa Star hahafahana mampiakatra ny hambom-pon’izy ireo. Miisa 268 ireo nahazo izany tamin’ity taona 2019 ity,
Ligin’ny baolina kitra Matsiatra Ambony Andro faha-9 farany anio alarobia 13 febroary 2019
Miditra amin’ny andro faha-9 farany amin’ny fifanintsanana ny fiadiana ny ho tompondakan’ny baolina kitra sokajy D-1 ny ligin’ny baolina kitra Matsiatra Ambony.
Air Madagascar Sahirana tanteraka
Mampitaraina, mampikaikaika, mahatezitra olona maro ny zava-misy sy ny fomba fiasa eny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato.